WatchOS တွင် Spotify သည်တရားမ ၀ င်၊ ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ Watchify | ငါက Mac ပါ
WatchOS တွင် Spotify သည်တရား ၀ င်မဟုတ်ဘဲကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ Watchify
အသုံးချ | | NOTICIAS, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
developer တစ်စုကဖန်တီးလိုက်ပြီ စောင့်ကြည့်ပါ, သင့်ထံမှသီချင်းဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့် WatchOS အတွက်တရားဝင်မဟုတ်သော application တစ်ခု Spotify.
အကယ်၍ သင် app ကိုဖန်တီးမည်ဆိုလျှင်သင်စဉ်းစားနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်နေသည်
လျှောက်လွှာတင်ရန်ငြင်းဆန်သောထိုကုမ္ပဏီများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပါပြီ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲဒါကိုအသုံး ၀ င်တယ်၊ အမြတ်အစွန်းမရဘူးလို့ပြောတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် Facebook နဲ့ Google အကြောင်းပြောနေတာပါ။
ဒါပေမယ့်နာရီထဲကပျောက်နေတဲ့အခြား app တစ်ခုပါ Spotify, သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းလည်းမရှိပါ။ ကံကောင်းတာကထိုသဟဇာတပြproblemနာမှဖြေရှင်းချက်ရောက်ရှိ။
ကျနော်တို့စောင့်နေစဉ် Spotify App တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားသည်ဖြစ်စေ၊ မစဉ်းစားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာ Watchify လိုမျိုးအခြားသူများကခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုရှိသည် သင်၏ဂီတကိုဖွင့်ပါ Spotify Apple Watch မှာ
Watchify ရှိသည်ဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် Spotify သင့်ရဲ့နာရီပေါ်မှာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ ဒီ app ကို install လုပ်ရုံသာမကသင်၏ဂီတအားလုံးကိုခံစားနိုင်မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်သင့်သီချင်းများနှင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းသီချင်းအသစ်များကိုသင်ရှာ။ မရပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အဆုံးစွန်သောဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Spotify သူကလျှောက်လွှာကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။
Watchify သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းကို App Store မှအခြားလျှောက်လွှာများကဲ့သို့ရှာနိုင်သည် WatchOS ။
ကျနော့်အမြင်အရ Apple Watch အတွက်တရားဝင်လျှောက်လွှာတင်တာဟာအမှားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး Spotifyဂူဂဲလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Snapchat တို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အကြိုက်ဆုံးမီဒီယာနှစ်ခုလုံးကိုလိုချင်သည် iPhone ကို နာရီများတွင်ရှိသကဲ့သို့၊ အကယ်၍ မတတ်နိုင်ပါကအချို့သည်၎င်းတို့အားအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားမည်၊
ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဂရုမစိုက်ကြပါလျှင် အသုံးပြုသူများသည်ငါတို့မှားသွားပြီ ... ငါတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမှတ်မိကြစို့ Apple ကဂီတ y Spotify သူတို့နှစ် ဦး စလုံး၏အနာဂတ်အတွက်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောတိုက်ပွဲတွင် Apple Music အတွက်တစ်ခုတည်းသော streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လမ်းများစွာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် Apple Music ကိုလမ်းလွဲစေသည်။ ဘက်ထရီတွေထားပါ Spotify.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » WatchOS တွင် Spotify သည်တရား ၀ င်မဟုတ်ဘဲကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ Watchify
Virtual City 2: Paradise Resort (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
Best Buy အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကစတိုးဆိုင်များတွင် Apple Watch ကိုပိုမိုလိုလားသည်